China Global Freigance - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing တရုတ်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Gig Freelancing တရုတ်
တရုတ် - ရှီသည်ဂျက် Ma လက်မှတ်၊ ကွန်မြူနစ်ခေတ်လွန်အာဏာသိမ်းမှုအဖွဲ့ IPO ဘီလီယံနှင့်ချီသောတန်ဖိုးကိုပေးသည်
မတ်လ 1, 2021 မတ်လ 1, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
တရုတ်အစိုးရသည် Alibaba Group အားဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကိုထောက်ခံသည့်အတွက်ချီးကျူးခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာကုမ္ပဏီသည်လယ်သမားများအား၎င်း၏ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ တန်တန်ဖိုးရှိသည့်လယ်ယာထွက်ကုန်များကိုရောင်းချရန်ကူညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရေးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်အေဂျင်စီသည်တိုင်းပြည်အတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးအတွက်စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Bitcoin Decline အပြီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Gold ကိုဒုတိယအကြိမ်ကြည့်ရှုကြသည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
Bitcoin, virtual ငွေကြေး၏စျေးနှုန်း, ဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ၆.၂၈% အထိကျဆင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၄၃,၁၁၉ ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့သည်။ coindesk quotation data အရ Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၄၃,၆၀၇ ဒေါ်လာ ၇.၂၃% ကျဆင်းသွားကြောင်းကိုးကားခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ဒေါ်လာ ၅၈,၃၅၄.၁၄ ၏စံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Bitcoin သည် ၂၆% ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
Alibaba နှင့် Pinduoduo တို့သည်စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ လက်ရှိပြိုင်ဆိုင်မှုသည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်အကြပ်အတည်းအပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောစားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဖြူးရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သမ္မတ Xi သည် Alibaba ၏ Jack Ma Digital Yuan Trial Profits ကြောင့်ပုရွက်ဆိတ်အုပ်စုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်းလွှမ်းမိုးမှုကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းစဉ်အလီဘာဘာ၏လုပ်ငန်းများနှင့်၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းများသည်မကြာသေးမီလများအတွင်းပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အရ သစ်တစ်ခုအစီရင်ခံစာ, MYBank, Ant Group ၏လက်အောက်ခံအစိုးရကယွမ်ငွေဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ရုရှား Gosduma သည်နေတိုး၏လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးခြိမ်းခြောက်မှုများကိုရုရှားသာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိစေသည်။ မော်စကိုသည်သဘာဝအားဖြင့်မဟာမိတ်အားပျော့စေလိုသည်။ ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတော် Duma ကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးဒုဥက္ကHead္ဌဖြစ်သူ Dmitry Novikov ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
The Hague —Karim Khan သည် ICC ၏အစိုးရရှေ့နေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သောကြာနေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောနိုင်ငံ ၇၂ နိုင်ငံမှအများစုသည်ဗြိတိသျှကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည် Karim Khan သည်အစိုးရရှေ့နေအသစ်ဖြစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အာဏာရခဲ့သော Fatou Bensouda နေရာတွင်အစားထိုးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်ခုံရုံး (ICC) မှ အစိုးရရှေ့နေအသစ်သည်အဖွဲ့အစည်း၏သမိုင်းတွင်ဤရာထူးကိုတတိယအနေဖြင့်ထမ်းဆောင်လိမ့်မည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021 ကက်သရင်း Zhang	မှတ်ချက် Leave
Chiru ဟုလည်းလူသိများသောတိဗက်အလျားလျားသည်တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်တွင် elves များအဖြစ်မှတ်ယူခံရသောတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ Chiru Tibetan ဘူမိဗေဒသည်ထူးခြား။ ရှားပါးသောမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းနှင့်ထူးဆန်းသောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ရုတ်တရက်မရေမတွက်နိုင်သောတိဗက်ခုံသမာဓိများကိုတရားမ ၀ င်အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းသည် Shahtoosh ဟုခေါ်သော shawl ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် soft chiru သိုးမွှေးကြောင့်သာဖြစ်သည်။ တရုတ်အစိုးရသည်မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသည့် antelopes များအားကာကွယ်ရန်တရားမဝင်ခိုးကူးခြင်းကိုနှိမ်နင်းခဲ့သည်။ IUCN (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ) သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစာရင်းတွင်တိဗက်အူတိုင်ပါဝင်သည်။ တိဗက်အန်တီပိုလ်၏ကမ္ဘာကိုချဉ်းကပ်ကြပါစို့။
Baidu သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ထင်မြင်ချက်အပေါ် ၆% တက်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဘယ်တော့လဲ Baidu စတော့အိတ်ချိန်းသည် ၆% အထိမြင့်တက်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကတော့ဒါကိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ စပွန်ဆာပေးသော ADR Class A သည် ၂၉၅.၁၄ ဒေါ်လာ၊ ၁၈.၅၅ ဒေါ်လာ (သို့) ၆.၇% ဖြင့်ကုန်သွယ်သည်။ တရုတ်အင်တာနက်မှပါးနပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤစတော့၏အလားအလာကိုမြင်ပြီး Baidu စတော့ရှယ်ယာတွင်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
Coronavirus - WHO မှတရုတ်၏မူလတွေ့ရှိချက်များကိုပဲ့တင်ထပ်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည် Wuhan ရှိ coronavirus ၏မူလအစကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏တိရိစ္ဆာန်ဇာစ်မြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်“ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ” ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်လင်းနို့များသို့မဟုတ် pangolins များမှဆင်းသက်လာသည်ဟုခိုင်လုံသောခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိဟုသူကယူဆသည်။
APAC ရှိ Mastercard, SAP Concur အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
Mastercard သည် SAP Concur နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် အာရှ - ပစိဖိတ်ဒေသမှာ။ SAP Concur နှင့် Mastercard သည်ဖောက်သည်စီးပွားရေးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အားဖြည့်မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။ SAP Concur နှင့် Mastercard သည်ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအားခရီးသွားအာမခံ၊ တိုးမြှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားသက်သာခွင့်များနှင့်အခြားသက်သာခွင့်များကိုပေးသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ရေနံစျေးနှုန်းများဆက်လက်မြင့်တက်နေ ၎င်းသည်ငါးနှစ်အတွင်းအနိမ့်သို့ကျသွားပြီးနောက်ရေနံစျေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့ရေနံစျေးနှုန်းကတစ်စည်ကိုဒေါ်လာ ၆၀ ကျော်တက်သွားတယ်လူအများကရေနံဈေးကိုအဘယ်ကြောင့်မြင့်တက်သွားစေနိုင်သနည်းဟုတွေးမိစေသည်။
Hyundai Motor သည် Apple နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကားတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်မရှိပါ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Apple မှကားစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည့်သတင်းရင်းမြစ်များစွာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မကြာသေးမီကအဲဒီမှာ Hyundai ရဲ့ Kia Motors နဲ့ Apple ပူးပေါင်းမယ်လို့ကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်လာ.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Tencent ၏မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာများအရတရုတ်နိုင်ငံတွင် Post-84 ၏ 90% ကျော် (၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းတွင်မွေးဖွားသူများ) သည်အထူးသဖြင့်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ရန်ပုံငွေများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ဒါဟာရုတ်တရက်နဲ့တူတယ်၊ Baijiu (တရုတ်ယမကာ) အကြောင်းပြောနေတာပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကဆေးဝါးသိုလှောင်ရုံတွေအများကြီးနဲ့အတူခန့်မှန်းခြေအများဆုံးရန်ပုံငွေထဲကတစ်ခု။
ဘီလာရုစ်ဖိုရမ် - ဘီလာရုစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ဘီလာရုစ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီသည်၎င်းကိုတည်ထောင်သူကိုပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုတရားဝင်ပေးပို့ခဲ့သည် ကွေးနနျးစာ ရုပ်သံလိုင်း NEXTA Stepan Putilo နှင့်ယခင်စာချုပ်အရပိုလန်မှအယ်ဒီတာချုပ် Roman Protasevich ။ ဘီလာရုစ်ကေဂျီဘီသည်ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်များအားအကြမ်းဖက်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ယန်သည် ၁၉၉၉ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ့အဖွဲ့တွင်အငယ်ဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားဖြစ်သည်။ သူသည်အပြာရောင်ကော်လာအလုပ်ကိုလုပ်ရန်နောင်တမရပါ။ လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကကြီးမားသောမြို့တစ်မြို့တွင်ထွန်းလင်းရန်အိပ်မက်မက်နေသည့်ယန်သည်အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သူငယ်ချင်းအချို့နှင့် Xiamen သို့ရောက်လာသည်။
အစပိုင်းတွင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ၏အကြံအစည်ကိုနားထောင်ခဲ့ပြီးဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်သင်တန်းတက်ရန်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ တစ်လလုံးလုံးဆံပင်ကိုဆေးကြောတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး “ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကနည်းပြဆရာရဲ့ဆံပင်ကိုဆေးပေးဖို့ပဲ။ သူသက်သောင့်သက်သာရှိခဲ့လျှင်သင်တန်းပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အဲဒီမှာကတ်ကြေးတစ်ချောင်းတောင်မထိဘူး။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကရရှိခဲ့သောအကျိုးအမြတ်များကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားရန်အတွက်ရွှေသည်အဆိုးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရင်ဆိုင်ရသည်။ စျေးကွက်ကနေလာတဲ့အရောအနှောအချက်ပြတွေရှိတယ်။ နှင့်ကုန်သည်များကဤသည်ကိုရွှေများအတွက်အကောင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ရက်သတ္တပတ်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုခွဲခြားဖြစ်လာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကမှ ၂% ကျော်အထိအနိမ့်သို့ကျဆင်းပြီးနောက်ရွှေသည်တစ်အောင်စကိုတစ်အောင်စကိုကန်ဒေါ်လာ ၁၇၉၆.၇၇ သို့ ၀.၃% ရရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသံမဏိအသုံးပြုသူတရုတ် သူတို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းသို့နိုင်ငံခြားသတ္တုများတင်သွင်းမှုကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ တရုတ်သည်နိုင်ငံတကာမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတရားမ ၀ င်ကတည်းကပထမဆုံးတင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျသံသတ္တုရိုင်းမိုင်းလုပ်သားများသည်ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ကတရုတ် - သြစတြေးလျစက်မှုဖိုရမ်သို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များကဖော်ပြသည်။
ရှန်ဟိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Fansub အဖွဲ့ ၀ င်များအားဖမ်းဆီးခဲ့သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင်ရှန်ဟိုင်းမြူနီစီပယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဗျူရိုကအထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ သံသယရှိသူတွေဟာ 2018 ခုနှစ်ကတည်းကပြည်ပဆာဗာတွေနဲ့ကုမ္ပဏီအများအပြားကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူတို့သည်တရားမဝင်နိုင်ငံခြား torrent ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ဗီဒီယိုများကူးယူပြီးဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီအတွက်တရုတ်စာတန်းထိုးများပြုလုပ်ရန်ဘာသာပြန်များကိုငှားရမ်းသည်။
Alibaba - Ma စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များစာရင်းမှချန်လှပ်ထားခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အလီဘာဘာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ Jack Ma သည်ရှန်ဟိုင်း Securities News သတင်းစာ၏မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးတွင်အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ဝေသောတရုတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များစာရင်းတွင်မပါဝင်ပါ။ ရိုက်တာသတင်းဌာန အစီရင်ခံစာများ။ စာရင်းတွင် Huawei Technologies ကိုတည်ထောင်သူ Ren Zhengfei၊ Xiaomi ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Lei Jun နှင့် BYD Auto ကိုတည်ထောင်သူ Wang Chuanfu တို့ပါဝင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
တရုတ်ဖြူကော်လာသည်အချိန်ပိုလုပ်သည်ကိုလူတိုင်းသိသော်လည်းမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိနည်း။ မကြာသေးမီကနေဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခု Zhaopinတရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဟန်းဆက်များထဲမှတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တရားကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။
၀ န်ထမ်း ၈၁.၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အပတ်တိုင်းအချိန်ပိုလုပ်ကြသည်၇၇.၆၁% သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲက ၂၄.၇၀% ဟာလခပေးစရာမလိုဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ ပျမ်းမျှအချိန်ပိုမှာတစ်ပတ်လျှင် ၆.၄၅ နာရီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တရုတ်မိုဘိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း DiDi သည်အချိန်ပိုအများဆုံးနှင့်ထိပ်ဆုံး ၃ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် JD၊ Tencent နှင့် 77.61Ganji ကုမ္ပဏီများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ JD တွင်ရုံးမှထွက်ခွာသည့်ပျမ်းမျှအချိန်မှာ ၂၃း၁၆ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှ PR ဖိအားများကြောင့် DiDi သည်ဤအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိတော့သောကြောင့်အခြေအနေမှာတိုးတက်မှုမရှိပုံရသည်။
ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီက Cayman ကျွန်းများတွင်ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် HNA Group ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ၎င်း၏ယခင်နှင့်လက်ရှိအကောင့်ထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်သောငွေသားလှုပ်ရှားမှုများကို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ကြွေးရှင်ကိုယ်စားသူ၏အကြွေးရှင်များကဒေဝါလီခံရန်အသနားခံလွှာသုံးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုခုသည်မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်မပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိကိုလည်းစုံစမ်းနိုင်သည်။
ရုရှား - အာကာသအစီအစဉ် 2021 ကိုလွှတ်တင်သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သည်ရုရှားအာကာသအစီအစဉ်အတွက်ကောင်းမွန်သောနှစ်မဟုတ်ပါ။ ရုရှားသည်အာကာသလွှတ်တင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။ Roscosmos အနုတ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်းကိုပြနေသည်။ အမေရိကန်သည်နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရှိနေပြီးတရုတ်ကနောက်တွင်ရှိသည်။ တရုတ်အမျိုးသားလွှတ်တင်မှုသည်မအောင်မြင်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရုရှားသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၁၁ ခုအနက် ၄ ခုသာရှိသည် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ISS) ။
China - တရုတ်ဗဟိုဘဏ်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ပုရွက်ဆိတ်အုပ်စုအား Alibaba အားဖိအားပေးရန်
ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
Alibaba ၏ Ant Group သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် EyeVerify ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရောင်းချရန်ကြိုးစားနေသည်။ Zoloz ဟုလည်းခေါ်သည်၊ EyeVerify သည် ISO / IEC စံတင်ဆက်မှုတိုက်ခိုက်မှုထောက်လှမ်းခြင်း (PAD) နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ EyeVerify software သည်လက်ရှိတွင် US ဘဏ်များနှင့်အခြားဘဏ္identityာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှသုံးစွဲသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အသုံးပြုသည်။
FTC - Xiaomi မှခွင့်ပြုချက်မရှိသောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 ဇန်နဝါရီလ 31, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တတိယအကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Xiaomi Corp သည်အမေရိကန်ကိုအမှုဖွင့်ထားသည်။ Xiaomi မှတရားရုံးသည်အမေရိကန်အစိုးရအားလူမည်းစာရင်းအားပယ်ဖျက်ရန်ဖိအားပေးရမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက် Austin နှင့်ဘဏ္asာရေးအတွင်းရေးမှူး Janet Yellen အမည်ရှိ တောင်းဆိုသူအဖြစ်။
Alibaba သည်ဘဏ္Holdာရေး ဦး ပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမည်
ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အလီဘာဘာ၏ Ant Group သည်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မှီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒါ အဆိုအရ Fox စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာ ဒီကိစ္စကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသူများအဆိုအရကုမ္ပဏီသည်ဘဏ္holdingာရေးхолдингကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping သည် Davos စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတရှီ၏မိန့်ခွန်းတွင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညီမျှမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖိုရမ်ကိုအွန်လိုင်းပုံစံဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလည်းဖိုရမ်သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
Coronavirus - ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်စံချိန် ၂၀၂၀ အဆိုးဆုံးနှစ်
ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးနှစ်ဖြစ်သည် တစ်ဘီလီယံနည်းပါးလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောက်မှု Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေဟာယူရို ၁ ထရီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (UNWTO) ကဖော်ပြသည်မှာ ၂၀၁၉၉ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအရေအတွက်သည် ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။
Coronavirus - WHO မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစတင်
ဇန်နဝါရီလ 29, 2021 ဇန်နဝါရီလ 29, 2021 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
သောကြာနေ့တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) အဖွဲ့သည်ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်စျေးကွက်များသို့လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည် Wuhan, တရုတ်, ထွန်းသစ်စဗိုင်းရပ်စ်၏မူလအစသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်။ တစ်နှစ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းပေါင်းများစွာကူးစက်နှင့်အသတ်ခံ။ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းကူးစက်မှု ၁၀၁ သန်းကျော်ကြောင့်လူ ၂ သန်းကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
Regulator: Ant Group စုံစမ်းမှုကကြီးထွားမှုကိုမထိခိုက်စေဘူး
ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Liang Tao ကမကြာသေးမီက Ant Group ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလေ့လာခြင်းသည်၎င်း၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားနည်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအစိုးရကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုပစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
B2B - SAP ဟောင်ကောင်၊ Deloitte အဖွဲ့တက်
ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 Samuel Gush	1 မှတ်ချက်
SAP ဟောင်ကောင်နှင့် Deloitte တစ်ခုတိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်ရောက်စေဖို့တက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ။ ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်သည် Deloitte အားနိုင်ငံတကာ B2B ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလိုက်နာမှုပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် SAP GTS အပါအ ၀ င်ဖောက်သည်များအား SAP ထုတ်ကုန်များကိုတိုးချဲ့ခွင့်ပြုသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 27, 2021 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကအသစ်တစ်ခုကိုအမြင်ချည်အပေါ်ဖွင့်လှစ် Doubanလူတွေကဘာမှမဆွေးနွေးတဲ့တရုတ်လူမှုရေးကွန်ရက် -“ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်ဘယ်လောက်ကျလဲ။ ငွေအလုံအလောက်စုဆောင်းလိုက်တာနဲ့ငါ့ရည်းစားနဲ့ငါလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ ” အဖြေတွေကတော့ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပဲ။
မြို့ငယ်လေးများမှမြို့များမှလူများကပင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်သူတို့အတွက်ဒေါ်လာ ၃၀,၀၀၀ ကျော်လွယ်ကူစွာကုန်ကျနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒူဗားရားများသည်သာမန်ထက်ထူးကဲသောလောသို့မဟုတ်ယင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ထိုသို့ဖြစ်နေခြင်းလော။
ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
e-commerce ဈေးကွက်သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ e-commerce လက်လီရောင်းချမှုသည်ဒေါ်လာ ၄.၉ ထရီလီယံအထိရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ 4.9 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်စားသုံးသူသည်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀၁.၇၅ ဘီလီယံသုံးစွဲခဲ့သည်။ သို့သော်ဘယ်တော့မှမ ၀ ယ်သင့်သောပစ္စည်းအချို့ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် Alibaba ၏ AliExpress တွင်။
UNCTAD - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Plummets
ဇန်နဝါရီလ 25, 2021 ဇန်နဝါရီလ 25, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်ကုလသမဂ္ဂကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာညီလာခံ (UNCTAD) ကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ UNCTAD မှဤအညွှန်းကိန်းမှပြန်လည်နာလန်ထူရန် ၂၀၂၂ အထိနှောင့်နှေးလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
AliExpress နှင့် Amazon ဖောက်သည်ပျက်ခြင်း
ဇန်နဝါရီလ 25, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus ကူးစက်မှုသည်လူတို့၏နေထိုင်ပုံနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကငါကနေထုတ်ကုန်ဝယ်ယူခဲ့သည် AliExpress, တရုတ်အခြေစိုက်လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းစျေးကွက်။ ခြေရာခံနံပါတ်ကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသက်သေပြပြီးတကယ်တော့တရုတ်ကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး။ ပြန်အမ်းငွေအတွက်ကျွန်ုပ်အယူခံဝင်ခဲ့သည်
WeChat ၏ဖန်တီးသူသည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်ခိုးယူခြင်းအတွက် Keyboard Apps များကိုအပြစ်တင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 25, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 GNAF	မှတ်ချက် Leave
Tencent ၏အဓိကထုတ်ကုန်သုံးခုဖြစ်သော WeChat, QQMail နှင့် FoxMail တို့၏တိုးတက်မှုကို ဦး ဆောင်သူအဖြစ်လူသိများသော Allen Zhang ကယခုနှစ်ည၏ WeChat ကိုကြေငြာခဲ့သည် WeChat တွင်မကြာမီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် virtual keyboard အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အသုံးပြုသူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ချက်တင်စကားပြောခြင်းမှအခြားကီးဘုတ်အက်ပ်များကိုတားဆီးရန်။
WeChat တွင်နေ့စဉ်သုံးစွဲသူပေါင်း ၁.၀၉ ဘီလီယံရှိသည်။ ၄ င်းတို့အနက်သန်း ၃၃၀ သည်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ WeChat Moments သို့နေ့စဉ်ဓာတ်ပုံသန်း ၆၇၀ နှင့်ဗီဒီယိုတိုတိုသန်း ၁၀၀ ကျော်ကိုနေ့စဉ်တင်နေသည်။ ” ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သော WeChat သည်တရုတ်လူမျိုးများအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာ၊ မိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်း၊ အစားအစာမှာယူခြင်း၊ ရထားနှင့်လေယာဉ်လက်မှတ်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းများအတွက်အရာအားလုံးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်၎င်းကိုသူတို့၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြားမှဗင်နီဇွဲလားရေနံစိမ်းကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီများ ၀ ယ်ယူနေ
အချို့သောမရိုးသားသောတရုတ်ရေနံရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများသည်ဗင်နီဇွဲလားရေနံစိမ်းကို ၀ ယ်ယူပြီး ၄ င်း၏အစစ်အမှန်ဇာစ်မြစ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ပေါင်းထည့်သည်။ ဒါကအသစ်တစ်ခုအရသိရသည် ဘလွန်းဘာ့ဂ်အစီရင်ခံစာ။ ဗင်နီဇွဲလားရေနံလုပ်ငန်းအပေါ်အမေရိကန်၏ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရှားရန်မရိုးသားသောကုန်သည်များအသုံးပြုသည့်လိမ္မာပါးနပ်သောနည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ထားသည်။
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
e-commerce လက္ကားပလက်ဖောင်းများသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူများသည်ရောင်းအားသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားပျံ့နှံ့သွားသော Coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်စားသုံးသူများအတွက်စျေးဝယ်မှု ဦး စားပေးပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံသည်အတုထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းအားနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကပံ့ပိုးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
12... 13 ပို့စ်အဟောင်းများ
SEO Reseller Packages ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလမ်းညွှန်
၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၅